Gcina $ 50 kubulungu bakho be-MarketingProfs PRO | Martech Zone
Yonga u- $ 50 kubulungu bakho be-MarketingProfs PRO
NgoMgqibelo, Januwari 5, 2013 NgoMgqibelo, Januwari 5, 2013 Douglas Karr
Uma ungakahlolisisi ezinye zezinzuzo ezinhle nezifundo ezitholakalayo I-MarketingProfs, kufanele ngempela. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-10, i-MarketingProfs ikhombise ochwepheshe ukuthi yini okusebenza ngempela - nokuthi yini okungasebenzi - emakethe namuhla.
Ubulungu obuyisisekelo bufaka ukufinyelela kulabhulali ecebile yama-athikili nezincwadi zezindaba. Ubulungu be-PRO bungeza izingqungquthela zokuthi zenziwe kanjani, ama-webcast amafushane we-Thatha ama-10, amaqoqo ama-Case Study ama-SmartTools, nokuningi. Joyina namuhla, futhi ufunde ukuthi kungani ochwepheshe abangaphezu kuka-492,000 bethembele ku-MarketingProfs ukubasiza ukwakha izinhlelo zokumaketha ezisebenzayo.
Joyina namuhla usebenzisa ikhodi yekhuphoni I-DKVIP futhi uzothola isephulelo esingu- $ 50 kuzindleko zobulungu be-PRO ezingama- $ 279!
I-Inthanethi igcwele izeluleko zokumaketha, izeluleko zokumaketha, kanye nochwepheshe bezokumaketha — kepha okuningi okukhona kukhona udoti omsulwa noma kuyadida ukuthola. Ithimba lokuhlela le-MarketingProfs lisika wonke lo msindo wokumaketha ukuthola ochwepheshe nabathengisi abasezikhundleni abazi ukuthi bakhuluma ngani. Bathatha ulwazi lwabo bese balixubanisa nobuchule babo bokumaketha ukuze buguquke bube izeluleko ezingokoqobo ongazisebenzisa ngezincwadi zethu zezindaba, izingqungquthela, izingqungquthela, i-podcast, izindatshana nama-webcasts.
Kumele ngabe bakwenza kahle, bayinkampani eyizigidi zamadola esebenzela umphakathi osomabhizinisi abangaphezu kwama-492,000, abanikazi bamabhizinisi amancane, nabathengisi abangochwepheshe ezinkampanini ezinkulu zomhlaba.
Hlaziya: Khiqiza Okuqukethwe Okungcono Kaningi